Tontosa ny 60% hatramin’ny 90%-n’ny asa: ho vita ny volana janoary ny Akademian’ny zavakanto - ewa.mg
News - Tontosa ny 60% hatramin’ny 90%-n’ny asa: ho vita ny volana janoary ny Akademian’ny zavakanto
lehibe, hisy ny Akademia nasionalin’ny zavakanto sy ny kolontsaina
na ny Anac no hatsangana etsy Ambohitsorohitra ambany. Miandry
fatratra ny fahavitany ireo mpisehatra eo amin’ny tontolon’ny
zavakanto sy ny kolontsaina.
Goavana ! Izay no azo hanasokajiana ity fotodrafitrasa iray
ity. Ireo izay mandalo eny Ambohitsorohitra ambany, manoloana ny
farihin’Anosy dia mahatsikaritra avokoa ny fihazakazak’ilay tranobe
hahorina eo. Ny Akademia nasionalin’ny zavakanto sy ny kolontsaina
(Anac) io, izay tafiditra anatin’ny vina napetraky ny
filoham-pirenena sy ny minisitera tompon’andraikitra amin’ny
fampiroboroboana ny tontolon’ny kolontsaina marolafy.
Nisy ny fidinana ifotony, nataon’ny minisitry ny Serasra sy ny
kolontsaina, Andriatongarivo lalatiana sy ireo mpiara-miasa aminy
teny an-toerana, omaly. Fantatra tamin’izany fa manodidina ny 60%
hatramin’ny 90% eo ho eo izao ny tontosa amin’ireo asa goavana.
Mizara efatra mazava ny asa tontosaina ao ka anisan’izany ny
toerana lehibe fanaovana fampisehoana, izay efa tontosa hatramin’ny
60%. Eo koa ny toerana hanaovana ny fampirantiana efa mananika ny
80 % ny asa. Ireo trano ho an’ny birao samihafa kosa dia efa
mananika ny 90% ny fahavitany. Miandry farany kosa ny fanatsarana
ny endrika ivelany sy ny manodidina ny trano iray manontolo.
“Raha tadidintsika, ny 15 novambra 2019 no nametrahantsika ny vato
fototra voalohany teto, ary notombanana ho vita amin’ity faran’ny
volana septambra 2020 ity ny asa rehetra. Noho ny zava-nisy anefa,
nisy ny fahatarana ka vinavinain’ny orinasa miandraikitra ny
fananganana ny Anac ho vita ny faran’ny volana janoary 2021 ny asa
rehetra”, hoy ny nambaran’ny minisitra teny an-toerana.
Miezaka manenjika ny fahatarana amin’ny fahavitan’ny asa, araka
izany, ny orinasa miandraikitra ny fananganana ny tranoben’ny Anac.
Etsy an-kilany, nanambara koa ny minisitra fa efa eo am-panomanana
ny rijantenin-dalàna mahakasika ity akademia ity ny eo anivon’ny
minisiteran’ny Kolontsaina sy ny serasera. Tombanana ho efa miasa
tsara sy hihodina, araka ny antom-pisiana ny akademia nasionalin’ny
zavakanto sy ny kolontsaina, amin’ny telovolana voalohan’ny taona
L’article Tontosa ny 60% hatramin’ny 90%-n’ny asa: ho vita ny volana janoary ny Akademian’ny zavakanto a été récupéré chez Newsmada.
Zava-dehibe eto amin’ny firenena. Vory lanona tetsy amin’ny Toby Ratsimandrava, omaly ireo olobe eo anivon’ny fitandroana ny filaminana sy ny avy amin’ny fitaterana ary koa ny eo anivon’ny fiangonana katolika. Maherin’ny enina hetsy ireo mpino ho avy ka niompana amin’ny fepetra horaisina momba izany ny fivoriana.Nambaran’ny kaomandin’ny zandarimariam-pirenena, ny Jly Andrianjanaka Njatoarisona tamin’izany fa tsy maintsy raisina ny fepetra satria marobe ireo vahoaka sy ny kristianina ho avy amin’izany fitsidihana ataon’ny papa François eto amintsika izany. Maherin’ny 600 000 izy ireo ka ny 500 000 avy eto amin’ny diosezin’Antananarivo raha avy any amin’ny diosezy hafa kosa ny ambiny, amin’ireo nisoratra anarana. Hisy ny fandaminana tsy maintsy atao, araka ny nambarany. Anisan’izany ny eny amin’ny seranam-piaramanidina. “Olona voatokana sy voafaritra ihany ireo mitsena eny Ivato. Tahaka izany koa amin’ireo lalana izorany ka tokony handray ny fandaminana ny rehetra mba hizotra araka ny tokony ho izy ny fahatongavan’izany raimandreny izany”, hoy izy.Maherin’ny 7 500 ireo mpitandro filaminana Tahaka izany koa ireo toerana rehetra hotsidihin’ny papa François : Andohalo, Amparibe, Toby Akamasoa sy Mahatazana… “Tsy maintsy ho hentitra izahay mba hipetrahan’ny filaminana. Efa voatokana avokoa ny olona afaka mandeha amin’ireny faritra ireny”, hoy ihany izy. Natsidiny koa fa efa misy ny toerana natokana ho an’ny fiara ary ny tokony handehanana an-tongotra mba tsy hampitohana ny fifamoivoizana. Hanetsika mpitandro filaminana 7 500 ny fitondrana amin’izany. Nanterin’ny prefet-n’Antananarivo, ny Jly Ravelonarivo Angelo kosa, fa mbola hojerena manokana ny fiahiana ny fandriampahalemana andavanandro tsy hiseho ny fanararaotana ataon’ny jiolahy. “Hojerena amin’ny Emmo/Nat izany ary tsy misy tokony hifanilika andraikitra”, hoy izy.Fiaraha-miasa amin’ny Amerikanina Ankoatra izany, efa misy ny fiaraha-miasa eo amin’ny zandary sy ny Amerikanina amin’ny fitandroana ny filaminana amin’ny fotoana ahatongavan’ny papa François. “Hisy ny fifandraisana tsy tapaka amin’ny masoivoho eo amin’ny fampitana vaovao. Mifanila rahateo ny toerana hivantanan’ny delegasiona tarihin’ny Ray Masina sy ny toeram-ponenan’ireo diplaomaty amerikanina sasany”, hoy ny Jly Ravalomanana, afakomaly.Ho an’ny antokon-draharahan’ny fitaterana (ATT) indray, hojerena manokana ny momba ireo fiara sy ny fitaterana. Ny toerana iaingana sy ny fahatongavana, avy amin’ireo diosezy miisa 21. Tokony hampiasa fiara hatrany amin’ny 4 000 mahery nefa tsy tokony hampiato ny fitaterana andavanandro any amin’ny faritra izany.Tsiahivina fa hisy hatrany ny fivoriana isan-kerinandro ataon’ireo tompon’andraikitra rehetra ireo, amin’izao herinandro vitsy hahatongavan’ny avy any Vatikana izao.Synèse R. L’article Fahatongavan’ny papa François: nametraka lamina sy fepetra ny Emmo/Nat a été récupéré chez Newsmada.
Fiadidiana ny Tanànan’Antananarivo: hifaninana amin’ny fambolena legioma ireo tsy manan-kialofana
Nosokafana, omaly, ny fambolena legioma sy voankazo teny amin’ny akany « Iarivo mivoy » Anosizato. Tafiditra ao anatin’ny tetikasa iarahan’ny CUA sy ny « Fondation Axian » , izany hamatsiana sakafo ny « cantine scolaire » sy ireo tsy manan-kialofana tezaina eny anivon’ny akany. Mandray anjara amin’ ny fambolena sy ny fikarakarana ny zaridaina ireo tsy manan-kialofana tezaina ao.Afahana miatrika ny ho avy sy ny fiainany“Tsy an-tery fa ireo mazoto no manao ny asa. Hisy ny fampiofanana sy fampianarana mba hoentin’izy ireo miatrika ny fiainany sy ny hoaviny. Anisan’izany ny fambolena”, hoy ny talen’ny fampandrosoana ny lafiny toekarena eo anivon’ny CUA, Kamena Ivon. Nozaraina vondrona maromaro izy ireo ka hisy ny fifaninanana masina hahazoana fanomezana ireo hita fa mahafatra-po sy mavitrika indrindra.Tetikasa hitarina eny anivon’ny EPP eto an-dRenivohitraAnisan’ny karazam-pambolena hita eny an-toerana: « agri-fu », « agri -table » ary ny fambolena amin’ny toerana mirefy 600 m2. Eo koa ny fambolena amin’ny alalan’ny ambin’ny fitaovana tsy ilaina, toy ny fantsona “tyuaux” avy nanaovana trano. Mbola hitohy eny anivon’ny EPP ny hetsika tahaka izao.Synèse R.L’article Fiadidiana ny Tanànan’Antananarivo: hifaninana amin’ny fambolena legioma ireo tsy manan-kialofana a été récupéré chez Newsmada.
Tombanezaky ny BM: miharatsy toerana hatrany i Madagasikara
Navoakan’ny Banky iraisam-pirenena ny tatitra momba ny tombanezaka (CPIA)* 2018 tsara ho fantatra aty Afrika. Tombanana amin’izany ny rafitra politika amina firenena iray, fitomboan’ny harinkarena sy ady amin’ny fahantrana. Isa 1 ny ambany indrindra, 6 ny ambony indrindra amin’ny fitsarana firenena iray, mahakasika singa 16, nosakajina efatra : ny toekarena (fifanakalozana, tetibola, trosa) ; ny politika ara-drafitra (vola, varotra , orinasa); ny sosialy (lahy sy vavy, fiahiana ny maha olona…) ; ny fitantanana sy ny andrim-panjakana (lalàna, fangaraharahana…).Eto Madagasikara, salanisa eo amin’ny lafiny toekarena 3,7; ny rafitra momba ny vola , varotra, 3,3 ; ny lafiny sosialy amin’ny ankapobeny, 3,3 ; ary ny fitantanana sy ny andrim-panjakana 2,8. Ho an’i Madagasikara izany, 3,3 tamin’ny taona 2018. Miharatsy toerana hatrany nanomboka ny taona 2010, miabo 0,2 ; ny taona 2018, miiba -0,1 ny CPIA.Fitaovana iray lehibe tsara ho fantatry ny fahefam-panjakana ny CPIA amin’izay ezaka atao amin’ny ady amin’ny fahantrana. Hamaritan’ny vondrona mpamatsy vola ao amin’ny Banky iraisam-pirenena ny fanampiana sy ny fampindramam-bola ho an’ny firenena iray ny isa azo avy amin’izany tombana izany. R.MathieuCPIA* : Évaluation des politiques et des institutions en AfriqueL’article Tombanezaky ny BM: miharatsy toerana hatrany i Madagasikara a été récupéré chez Newsmada.
Manampy ireo tantsaha hanitatra ny lalam-barotra ny tetikasa Ambatovy. Tanjona ny hanampiana ny tantsaha hanome lanja kokoa ny vokatr’izy ireo eo imason’ny mpandraharaha eo amin’ny lafiny toekarena, mba hahafahany manitatra ny lalam-barotra ho azy ireo. Tohana eo amin’ny lafiny teknika sy fanomezana akora ary ny fikarakarana fitsidihana any amin’ny faritra hafa no ataon’izy ireo amin’izany. L’article Fanampian’Ambatovy est apparu en premier sur AoRaha.
Ady amin’ny covid-19: manomboka mivaha ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana
Tsikaritra eny anivon’ny fiarahamonina fa mihagoragora ny fanarahana ny fepetra ara-pahasalamana. Tsy ny tahotra ny aretina intsony no anaovan’ny olona arotava fa tahotra ny mpitandro filaminana.Eny an-dalambe, efa misy mahasahy tsy manao arotava intsony. Vao mivadika any anelakela-trano dia efa esorina ny takom-bava. Tsy misy manao fiarovana izany amin’ireo toerana tsy fandehanan’ny mpitandro filaminana.Tsy voahaja intsony koa ny elanelana na amin’ny fisisihana taxi-be, amin’ny hariva, na eny an-tsena na eny an-dalana. Miverina amin’ny teo aloha ny fiainan’ny mponina etoAntananarivo ary vitsy ireo tena manaja ny fepetra ara-pahasalamana.Ho an’ireo taxi-be, tsy misy mampiasa « gel désinfectant » hozaraina amin’ny mpandeha intsony. Tsy ampiasaina, araka ny tokony ho izy, ny arotava ho an’ny mpamily sy ny mpanampy azy. « Mafana ny andro ka mahatsiaro ho voahelingelina izahay », hoy izy ireo. Ny mpandeha taxi-be betsaka ireo manala arotava rehefa tafapetraka mahazo toerana ao anaty fiara ary tsy misy mifampiteny.Any an-tsekoly, ho an’ireo efa niditra nianatra kosa, misy ireo manaja tsara ny fepetra fiarovana amin’ny fakana sy fanaterana mpianatra. Toraka izany ny biraom-panjakana sy ny orinasa izay mbola sarotiny amin’ny fanasana tanana mialoha ny hidirana ao an-toerana sy fanaovana arovava. Eo koa ny fiangonana izay fatra-panaja ny fepetra rehetra mba hahalavorary ny fahasalaman’ny kristianina.Tatiana AL’article Ady amin’ny covid-19: manomboka mivaha ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana a été récupéré chez Newsmada.